Wasiirka amniga KG oo hortagay guddiga amniga baarlamaanka - Halbeeg News
Wasiirka amniga KG oo hortagay guddiga amniga baarlamaanka
BAYDHABO(HALBEEG)-Guddiga aminga golaha wakiillada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan xog wareysi ah la qaatay wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Eelaay.
Kulankaas oo wasiirka lagu weydiinayey su’aalo ku saabsan xaaladda ammaan ee Koonfur Galbeed gaar ahaan degmadda Baydhabo maaddama lagu jiro u diyaar garowga doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed. Gabagabada kulanka ayay guddiga amniga go’aanno ka soo sareen.
Go’aannada guddiga ay soo saareen ayaa sidaan u qornaa:
1. In la taageero dadaalada lagu sugayo amniga ee ay wadaan wasaaradda iyo ciidamada amniga.
2. Guddigu wuxuu garowsaday in ay jirto sabab macquul ah oo loo xoojiyo ciidamada, si tiradooda iyo tayadooda sare loogu qaado.
3. Guddigu wuxuu xaqiiqsaday inay lagama marmaan tahay in la xoojiyo howlgalda lagu sugaayo amniga magaalada Baydhabo.
4. Guddigu wuxuu ku amaanayaa wasiirka amniga, taliyeyaasha ciidamada amniga qaybahooda kala duwan sida ay har iyo habeen ugu taagan yihiin dadaallada lagu sugayo amniga iyo kahortagga dambiyada abaabulan ee lagu waxyeeleynayo shacabka.
5. Guddigu wuxuu ku adkeynayaa wasaaradda iyo ciidanka amniga iyo saraakiishooda inay sii adkeeyaan feejignaantooda, dadaalada lagu sugaayo amniga iyo xoojintiisa.
6. Guddiga wuxuu kacodsanaya shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ee u taagan badbaadinta nafta iyo hantida shacabka.
7. Guddigu wuxuu u mahadnaqayaa qeybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliyeed iyo saaxiibada AMISOM.
Taliska 27-aad ciidamada oo soo saaray amarro lagu sugayo ammaanka
Mareykanka oo safaaraddiisii Soomaaliya dib u furay